Imininingwane yeNkampani - Shandong Baishitong Plastic Products Co, Ltd.
IMAHHALA ye-SAHNDONG BAISHITONG COALIC COAL, LTDisebenzisa ipayipi ye-PVC esezingeni eliphezulu, ipayipi le-PP-R, ipayipi le-PE nezinto ezintsha ze-polymer eChina iminyaka engaphezu kwengu-20. Sesiqale ibhizinisi elincane, kepha manje sesingomunye wabahlinzeki nabathengisi abavelela eChina.
Namuhla, I-SAHNDONG BAISHITONG IMIPHAKATHI YOKUGCINA CO, I-LTD ibingomunye wabakhiqizi abaphambili bamapayipi epulasitiki aphezulu. Kulesi sigaba, i-BAISHITONG inezinhlobo ezingaphezu kuka-200 zemikhiqizo.
IMAHHALA ye-SAHNDONG BAISHITONG COALIC COAL, LTDibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe elisebenza nge-R&D, ukukhiqiza nokuthengisa ukonga amandla nokuvikela imvelo ipayipi lepulasitiki nezinto ezintsha ze-polymer. Inkampani itholakala eLinyi City, eSifundazweni saseShandong, ihlanganisa indawo engamamitha skwele ayi-100,000. Ngaphezulu kweminyaka engu-15 yentuthuko, le nkampani inonjiniyela abakhulu beR & D, abasezingeni eliphakathi abangama-20 bochwepheshe kwezobunjiniyela, abasebenzi bezobuchwepheshe beplastiki abangu-6 kanye nabasebenzi abayi-100.
IMAHHALA ye-SAHNDONG BAISHITONG COALIC COAL, LTD. ibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe elisebenza nge-R&D, ukukhiqiza nokuthengisa ukonga amandla nokuvikela imvelo ipayipi lepulasitiki nezinto ezintsha ze-polymer. Inkampani itholakala eLinyi City, eSifundazweni saseShandong, ihlanganisa indawo engamamitha skwele ayi-100,000. Ngaphezulu kweminyaka engu-15 yentuthuko, le nkampani inonjiniyela abakhulu beR & D, abasezingeni eliphakathi abangama-20 bochwepheshe kwezobunjiniyela, abasebenzi bezobuchwepheshe beplastiki abangu-6 kanye nabasebenzi abayi-100.
1. Ipayipi le-CPVC eliqinile lingasetshenziselwa ukwakhiwa kwegridi yamandla emadolobheni kanye noguquko;
2. Iphrojekthi yokwenza ngcono amadolobha;
3. IProjekthi Yezokwakha Izindiza Yezindiza;
4. Ukwakhiwa kwezindawo zezimboni nezokuhlala;
5. Ukwakhiwa kobunjiniyela bezokuhamba;
6. Ukufakwa kwamakhebuli enziwe ngamalambu;
7. Njengethiwekhi yokuvikela, endaweni yezokuxhumana ngocingo kanye nendawo yesiginali yethelevishini.
Amabhizinisi ethu ngokusebenzisa i-ISO9001: isitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi yango-2015, ISO14001: isitifiketi sokuphathwa kwezemvelo ngo-2015, OHSAS18001: Izitifiketi zokuphathwa kohlelo lokuphepha kwezokusebenza.
I-BAISHITONG inemigqa eyisithupha yokukhiqiza esezingeni eliphakeme yepayipi le-polyethylene namapayipi akhiqizwa amapayipi ayi-3 PVC, ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zemodeli ye-PE, i-PVC, i-pp-R, ipayipi le-RT nokufakwa kwepayipi, ngumkhiqizi omkhulu wamapayipi wepulasitiki.
Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwamadamu, ekuniseleni ezolimo, ezokuhamba, ezokuxhumana kanye nasekwakhiweni komasipala nakweminye imikhakha. Inethiwekhi yokusabalalisa isakazeka ezweni lonke. Eminyakeni yakamuva,I-BAISHITONG ivule imakethe yamazwe omhlaba, imikhiqizo yethu yathunyelwa eRussia, e-United States, eSouth Africa, e-Afrika Ephakathi, eRwanda, e-Angola, e-Ecuador, eVenezuela, eSpain nakwamanye amazwe, Inkampani ukuze iqhubeke namabhizinisi asezingeni eliphakeme, isayensi nezobuchwepheshe ifilosofi yokuthi "ikhwalithi ephezulu, kanye nensizakalo esezingeni eliphakeme" ukusebenzisana kwenkonzo ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe!
1. Ipayipi yekhwalithi ephezulu yePVC ngenani elifanelekile.
2. Okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengiswa.
3. Yonke inqubo izohlolwa yi-QC enomthwalo wemfanelo ekhombisa ikhwalithi yawo wonke umkhiqizo.
4. Amaqembu wokupakisha ochwepheshe agcina ukupakisha ngokuphephile.
5. Ukuhlolwa kwesivivinyo kungenziwa ngesonto elilodwa.
6. Amasampula anganikezwa njengezidingo zakho.